Xarunta xuquuqal iinsaanka Somaliland ayaa soo bandhigtay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsan heerka xuquuqal iinsaanka ee Somaliland. | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Xarunta xuquuqal iinsaanka Somaliland ayaa soo bandhigtay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku...
Xarunta xuquuqal iinsaanka Somaliland ayaa soo bandhigtay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsan heerka xuquuqal iinsaanka ee Somaliland.
Warbixintan oo uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha xarunta xuquuqal iinsaanka Somaliland Guuleed Axmed Jaamac, oo soo gaadhay Hadhwanaagnews ayaa u dhignayd sidan:-
Sanad kasta 9ka December, maalin ka hor Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqal Insaanka, waxa Xarunta Xuquuqal Insaanku ay soo saartaa warbixin sanad leh ah oo ay kaga hadlayso xaaladda xuquuqda aadanaha ee sanadkaas. Ujeedadu waa in dareenka lagu soo jeediyo arimaha xuququal insaan ee jira islamarkaana talooyin
1. In la cidhib tiro takoorka iyo faquuqa lagu hayo qabiilada laga tiro baan yahay, lana siiyo adeegyo
2. In la cidhib tiro tacadiyada ka dhanka ah haweenka, lana ansixiyo xeerarka ilaalinaya haweenka iyo hablaha ee ay ka mid yihiin xeerka qoyska, xeer kufsiga;
3. Inay samayso xeerka lagu cidhib tirayo gudniinka;
4. Inay joojiso xeerka ciqaabta ee ay ku qaadayso suxufiyinta. Suxufiyiinta oo xeerka ciqaabta lagu qaadaa waxaay ka soo horjeedda dastuurka iyo Xeerka Saxaafadda, iyo sidoo xeerarka caalamiga ah. Xeerarka madaniga ah iyo Xeerka Saxaafadda waa in lagu daaqo arimaha la xidhiidha warbaahinta;
5. Inay ogolaato in la furi karo warbaahin cusub oo ay ka mid tahay idaacaduhu. Dawladdu waa inay u soo celiso hanaankii lagu diiwaangelin jiray warbaahinta cusub islamarkaana ay ogolaato in kuwa jira cid cusub lagu wareejin karo. Sidoo kale waa in xayiraadda laga qaado wargaysyada xayiran ee Haatuf, Somaliland Times, al Haatuf al Arabia, Hubsad iyo Codka Shacabka, iyo shabakadaha la xayiray;
6. Inay dib u habayn ku samayso Booliiska Somaliland oo ay ka dhigto booliis ay dacwadihiisa qaadi karaan maxkamadaha caadiga ah iyo inay samayso hanaan booliiska lagula xisaabtami karo;
7. Inay joojiso dadka loo xidhayo dacwadaha madaniga ah;
8. Inay joojiso xadhiga iyo haynta sharci darada ah. Waa in xadhiga dadka loo raaco si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u yaal;
9. Inay hagaajiso xaaladaha saldhigyada boolioska.
Previous articleMudanayaasha Golaha Guurtida Oo Si Adag Uga Dooday Saddex Qodob Oo Mihiima
Next articleDeg Deg, Madaxwayne Siilaanyo Wuxuu Ahaa Nin Macaan,Iminka Waxaa Inoo Bilaabmaya Qadhaadhkii, Faysal Cali waraabe